In Uu Dhibsado Orinta Jamaahiirtiisa, In Cristiano Ronaldo Uu Danayste Yahay, In Tababare Didier Deschamps Aanu Rajo Ka Qabin Iyo Karim Benzema Oo Waxyaabo Badan Kala Cadeeyay. – WWW.Gool24.net
In Uu Dhibsado Orinta Jamaahiirtiisa, In Cristiano Ronaldo Uu Danayste Yahay, In Tababare Didier Deschamps Aanu Rajo Ka Qabin Iyo Karim Benzema Oo Waxyaabo Badan Kala Cadeeyay.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa waraysi dheer oo uu siiyay Canal+ waxa uu kaga hadlay sida uu u dhibsado in jamaahiirtiisa Real Madrid ay ku oriyaan marka aanu ka faa’iidayn fursadaha fiican ee ay kooxdiisu hesho, wuxuuna sidoo kale ka hadlay in Cristaino Ronaldo uu yahay mid danayste ah in ka badan sida uu isagu yahay laakiin waxa uu ku dooday in ayna taasi isaga qasin oo ay si fiican u wada ciyaaraan xidiga ree Portugal.
Karim Benzema ayaa sidoo kale ka hadlay fursada uu u haysto in uu dib ugu soo laaban karo waajibaadka xulka qarankiisa France wuxuuna sheegay in muddada uu Didier Deschamps macalinka ka yahay France aanu rajo ka qabin in uu dib ugu soo laabanayo kooxda xulka qarankiisa France oo uu waqti dheer ka maqan yahay.
Laakiin hadalka Karim Benzema ee ah in Cristiano Ronaldo uu yahay mid danayste ah in ka badan inta uu isagu yahay ayaa noqotay mid lama filaan ah iyada oo xidiga ree Portugal hore loogu eedeeyay in uu yahay mid anaani ah oo naftiisa ka hor mariya qof kasta.
Ugu horayn Karim Benzema oo ka hadlaya Ronaldo ayaa yidhi: “Ronaldo ayaa in aniga iga badan danayste ama anaani ah, laakiin taasi waa wax iska caadi ah. Si fiican ayaanu iskaga garab ciyaarnaa, waxaan jecelahay in aan isaga la ciyaaro.Dhamaadka danaystenimadiisu aniga ima qasto, waxay u fiican tahay kooxda”.
Intaa kadib Karim Benzema ayaa ka hadlay orinta uu kala kulmo jamaahiirta kooxdiisa Real Madrid marka aanu xaalad fiican ku jirin wuxuuna yidhi: ” Waa wax adag, gaar ahaan Spain halkaas oo mararka qaar aanad fahmi karin, qaybta ugu adagi waa marka ay eedayntu ka timaado jamaahiirtaada, si caadi ah ayay halkaas u joogaan si ay kuugu oriyaan ama foodhyaan”.
Karim Benzema ayaa sanadihii ugu danbeeyay ka maqnaa xulka qarankiisa France iyada oo Didier Deschamps uu waqti dheer iska indho tiray in uu Karim Benzema uu dib ugu soo celiyo kooxda qarankiisa inkasta oo kiiskiisii maxkamadeed uu noqday mid aan cadayn in uu danbiile yahay. Benzema ayaa sheegay in Didier Deschamps aanu wax rajo ah ka qabin in uu koobka aduunka ee Russia 2018 uu u soo xulan doono.
Karim Benzema oo macalinka France ee Didier Deschamps ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa wax aad u adag, anigu ma ihi doqon, laakiin waxaan doonayaa in aan dalkayga wax kula guulaysto. Anigu waxaan jecelahay kubbada cagta, anigu waxaan jecelahay tartamadan”.
Karim Benzema oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Cadaadiska in aad wadankaaga la guulaysataa waa wax kale, waxaan rajaynayaa in xaaladaydu isbadali karto. Inta uu Didier Deschamps tababaraha yahay, anigu ma heli doono fursada aan ugu soo laabanayo kooxda qaranka”.
Karim Benzema oo dadka xusuusinaya muddadii uu Didier Deschamps kooxda qaranka France uu isaga u diiday in uu qayb ka noqdo ayaa yidhi: ” Waxay ka badan tahay laba sano iyo badh, wax badan kuguma qaadanayso in aad fahanto waxa socda, isagu waa qof aan ixtiraamo, laakiin dhabarkiisa ayuu aniga ii soo jeediyay, waa wax dhibaato ah”.